सूर्य मा टेनिंग - सबै प्रकार को छाला लागि विभिन्न
गर्मी - एक अद्भुत छुट्टी, यात्रा, सूर्य, समुद्र र भव्य कांस्य तन लागि समय। तर हाल सम्म, यो मात्र होइन सुन्दर, तर पनि खतरनाक, छाला पराबैंगनी प्रकाश उजागर किनभने, गम्भीर क्षतिग्रस्त हुन सक्छ हुन सक्छ। यो जोगिन, समुद्र जाँदै, तपाईं उच्च गुणस्तरीय प्रयोग गर्नुपर्छ टेनिंग सूर्य मा - र तिनीहरूलाई चयन गर्ने अधिकार, तपाईं कस्मेटिक्स को प्याकेजिङ्ग मा मार्क मा सहित हरेक विस्तार गर्न ध्यान गर्न आवश्यक छ।
लेबलिंग एसपीएफ (सूर्य सुरक्षा कारक) प्याकेज आसपास द्वारा निर्धारित कस्मेटिक्स को सामान्यतया गुणस्तर। यो कारक अनुसार, तपाईं जोखिम को जोखिम मा आफ्नो छाला राख्दै बिना सूर्य खर्च गर्न अनुमति दिएको छ के समय निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। सूर्य सुरक्षा कारक को एक एकाइ एक तातो समुद्र तट मा 10 मिनेट खर्च गर्न मौका दिनुहुन्छ। उदाहरणका लागि, एसपीएफ 12 एकाइहरु संग एक क्रीम - 120 मिनेट सुरक्षित टेनिंग। निस्सन्देह, सूर्य पनि सबैभन्दा महंगा र उच्च गुणस्तरीय टेनिंग पूर्ण पराबैंगनी विकिरण को खतरा समाप्त गर्न सक्षम हुने छैन, तर यो कम से कम केही सुरक्षा गर्न राम्रो छ। लागू क्रीम, स्प्रे, लोशन र अन्य पदार्थ को प्रभाव अधिकतम, उपकरण एक विशेष छाला को प्रकार को लागि उपयुक्त प्रयोग गर्न आदर्श छ।
पहिलो प्रकार - तथाकथित "albino", जो संग स्पष्ट चमड़ी, प्रकाश-रंगीन मान्छे समावेश (कहिले काँही - रातो) बाल, हरियो र नीलो आँखा। छाला चाँडै रातो हुन्छ र "बल्न" छील र inflamed बन्न सुरु किनभने त्यस्ता मानिसहरूलाई Sunbathing, धेरै गाह्रो छ। छाला को पहिलो प्रकार संग आराम गर्न देखाउन सकिन्छ जो सूर्य मा मात्र टेनिंग, एक शामियाना वा एसपीएफ 50 को एक सूर्य सुरक्षा कारक संग बलियो क्रीम को छाया मा समुद्र तट मा फेला पार्न छ, तर यो मामला मा पनि7भन्दा बढी मिनेट पराबैंगनी प्रकाश अन्तर्गत देखिन्छन्।
"नर्डिक", पहिलो धेरै समान, तर थप हार्डी - छाला को दोस्रो र तेस्रो प्रकार। यो नीलो वा खैरो आँखा, freckles र निष्पक्ष छाला, हल्का कपाल, हल्का खैरो वा खैरो। यो अवधिमा एसपीएफ 20-30 साथ प्रमुख धन को सुरक्षा अन्तर्गत ठाउँ लिन गर्नुपर्छ त घामले डढाउने काम समस्याहरू, मा सक्रिय सूर्य मा आफ्नो रहन को पहिलो दिन उत्पन्न हुन सक्छ, र त तपाईं एक मामुला क्रीम र लोशन गर्ने सार्न सक्छ। कुनै पनि सुरक्षा बिना गर्न सक्छन् सूर्य मा 15-20 भन्दा बढी मिनेट हुन।
छाला को चौथो प्रकार संग घाम मा मान्छे फेला सर्तहरू सबैभन्दा भाग्यवान्। तपाईं के थाहा घामले डढाउने काम को लागि एक राम्रो उपाय विशेषज्ञहरु तिनीहरूलाई लागि सल्लाह? छुट्टी को पहिलो दिनमा सूर्य सुरक्षा कारक एसपीएफ 6-10 संग कस्मेटिक तयारी को न्यूनतम संख्या, त्यसपछि यी समुद्र तट मा भाग्यशाली व्यक्तिहरूलाई, 45-60 मिनेट को कुनै पनि सुरक्षा बिना हुन सक्छ।
छाला तन खस्दा, यो अचाक्ली निर्जलित, जो पनि धेरै हानिकारक हुन सक्छ। तपाईं मात्र होइन कम प्रभाव दिन्छ उच्च गुणस्तरीय क्रीम मा शेयर गर्न आवश्यक त tanned छाला, गहन मइस्चराइजिंग आवश्यक छ, तर पनि तन बलियो हुनेछ। उपयुक्त मइस्चराइजर , दैनिक लागू गर्नुपर्छ, लुगा धुने, showering वा स्नान पछि। मा छुट्टी अवधि वा केही हप्ता भित्र यसलाई उच्च तापमान मा शरीर बाट चिस्यान जो tanned छाला गम्भीर बिगार्न सक्छ, छिटो केही समयमा प्रदर्शित हुने रूपमा, भ्रमण स्नान वा साउना देखि इन्कार गर्न राम्रो छ पछि। साथै, पनि सूर्य टेनिंग संग, यो सबै भन्दा राम्रो err र भिटामिन ए, को "posleplyazhnoe" समय integuments पहिले देखि नै छ जो पुनर्स्थापना र प्राप्त तन बलियो मदत पाएर आफ्नो छाला पोस्ने छ। र जब समुद्र तट मा झूट सूर्य अन्तर्गत काम गर्दैन एक समयमा, तपाईं सामान्य "औषधीको" घामले डढाउने काम को प्रभाव संग एजेन्ट भनिन्छ ( "तन") छन् प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी लामो हुनेछ छाला को तातो घाम अन्तर्गत बाँकी प्रमाण छ, यो धेरै कारक निर्भर - यस्तो अनुभवी यात्री छाला को व्यक्तिगत विशेषताहरु, तर पनि तन प्राप्त क्षेत्र मात्र होइन विचार गर्नुहोस्। दक्षिणी देशहरूको सूर्य सूर्य देश घर (पाठ्यक्रम, दिने भूमध्य मा स्थित छैन, जबसम्म) भन्दा गहिरो निशान छोड, र बाँकी नदीको प्रभाव समुद्र भन्दा अलि धेरै समय राखिएको।
Vuksta-Goltis विधि: चाँडै कसरी तन प्राप्त गर्न?
आफ्नो हात को सौन्दर्य: घर मा अनुहार मास्क विरोधी-वृद्ध
कलाई र टाउकोको अन्य भागमा ट्याटू। केहि टैटूहरूको मूल्यहरू।
अनुहार झुर्राहरू कसरी छुटकारा पाउन
खण्डका चिन्ह उपचार - यो सटीक योजना र धैर्य आवश्यक!
दबाइ "Symbiter": निर्देशन, analogs, समीक्षा
Hesba - घुमक्कड ध्यान लायकको
"Retinol": प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक
उपकरण दूध विभाजक। पुस्तिका, बिजुली विभाजक
खण्डमा "Corsairs:। प्रत्येक आफ्नै लागि" कम्प्युटर गेम
Polypropylene पाइप लागि मिसिन वेल्डिंग: कसरी चयन गर्ने?
गरेको मिर्गी को उपचार कुरा गरौं। आधुनिक प्रविधी र प्रमुख विशेषज्ञहरु को सिफारिसहरू
जापान राष्ट्रपति - Akihito। जीवन एउटा संक्षिप्त इतिहास